अर्को ग्रहमा जीवनको खोजी गर्दै नासा, आगामी नयाँ दुई मिसनको गन्तव्य तय
२o७४ पौष ८ शनिबार
आर्टिष्ट कन्सेप्ट : नासाले शनिको उपग्रह टिटानमा ड्रोनजस्तै स्पेसक्राफ्टहरु धेरै क्षेत्रमा उडाएर जीवनको अनुकूलताको खोजी गर्ने जनाएको छ । तस्बिर : नासा
अमेरिका । अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (नासा)ले अन्तरिक्ष अनुसन्धानलाई झन् तीव्र पार्ने भएको छ । यसअघि नासाको क्यासिनी उपग्रहले शनिग्रहसम्म पुगेर विश्राम लिएको थियो । उक्त मिसनबाट हौसिएको नासाले आगामी दिनमा दुईवटा नयाँ अन्तरिक्ष मिसन सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
नासाले आफ्नो अर्को सोलार सिष्टम मिसनलाई अझ परिष्कृत पार्ने भएको छ । यो पहिलेका प्रोजेक्टभन्दा महत्वपूर्ण र अनुसन्धान गहिराइसम्म पुग्ने गरी हुने बताइएको छ । नासाको अर्को मिसन यसअघि यसको स्पेसक्राफ्ट पुगेको ग्रहमै जाने तय गरिएको हो ।
नासाले अर्को मिसन कहाँ जाने र के गर्ने भनी योजना तर्जुमाका क्रममा दुईवटा गन्तव्यको पहिचान गरेको छ । जसअनुसार नासाका वैज्ञानिकहरुले शनिग्रहको चन्द्रमा टिटान अथवा पुच्छ्रेतारा ६७पी/चुर्युमोभ–जेरासिमेनकोलाई अब सुरु गरिने मिसनको गन्तव्य बनाउने भएका हुन् । यो घोषणा बुधबारमात्रै प्रेस टेलिकन्फरेन्समार्फत गरिएको हो ।
यस मिसनलाई ड्रागनफ्लाइ मिसन अर्थात् झिंगा/पुतली मिसन भनिएको छ ।
कस्तो मिसन हो ड्रागनफ्लाई ?
यो मिसनअन्तर्गत नासाले ड्रोनजस्तै यान शनिको ठूलो चन्द्रमा प्रक्षेपण गरिनेछ । नासाका अनुसार यो प्रक्षेपण सन् २०२५ मा गरिनेछ । उक्त यान सन् २०३४ मा शनि (स्याटुर्न)को चन्द्रमा टिटानमा अवतरण गर्नेछ । नासाको क्यासिनी हुयेजेन्स मिसनले यसअघि नै शनिको चन्द्रमा टिटानमा तरल अवस्थामा रहेका इथेन र मिथेनको नदी र तालहरु रहेको देखाइसकेको छ । वैज्ञानिकहरुले टिटानको उक्त वातावरणमा जीवनको कत्तिको सम्भावना रहेको वा नरहेकोबारे विस्तृतमा अनुसन्धान गर्नेछन् ।
लाउरेलमा रहेको जोन होप्किन्स अप्लाइड फिजिक्स ल्याब्रोटरीकी नेतृत्वकर्ता अन्वेषक एलिजावेथ टर्टलका अनुसार वैज्ञानिकहरुले त्यहाँ प्रिबायोटिक केमिष्ट्री (जीवनसम्बन्धी अनुकूलता)को अध्ययन गर्नेछन् ।
अर्को गन्तव्य कोमेट
कोमेटको स्पर्श ! कोमेट एष्ट्रोबायोलजी एक्स्प्लोरेस स्याम्पल रिटर्न (सीएईएसएआर) मिसनले कोमेटबाट पृथ्वीमा नमूना संकलन गरी पठाउने सम्भावना बढेको छ ।
टिटानबाहेक नासाका वैज्ञानिकहरुले कोमेटलाई समेत अर्को गन्तव्य छानेका छन् । जसलाई उनीहरुले कोमेट एष्ट्रोबायोलजी एक्सप्लोरेसन स्याम्पल रिटर्न (सीएईएसएआर) मिसन भनेका छन् । यसमै जाने तय भए उनीहरुको यो मिसन सन् २०२५ को अन्त्यतिर उक्त कोमेटमा पुग्ने गरी स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपण गर्नेछन् । उक्त कोमेट ६७पीको सतहबाट एक सय ग्राम नमूना संकलन गरिनेछ र यो सन् २०३८ सम्ममा पृथ्वीमा फर्किनेछ । यसको नक्सांकन रोसेटा एयरक्राफ्टले गरेको थियो । कोर्नेल युनिभर्सिटीका अन्वेषक स्टेभेन स्क्वेयर्सले रोसेटाको म्यापिंग कार्यले नाटकीय रुपमा उक्त कोमेटमा गएर यसका टुक्रा संकलन गर्न सकिने खुलाए ।
सन् २०१९ बाट फन्डिंग सुरु हुने
नासाले दुवै प्रोजेक्टका लागि फन्डिंग (कोष सञ्चालन) सुरु गर्ने भएको छ । यस्तो कोष सन् २०१९ को जुलाईदेखि सुरु हुनेछ । यसबाहेक नासाले अन्य दुई मिसन पनि सञ्चालन गर्नेछ । शनिकै अर्को चन्द्रमा एन्सेलाडुसमा जीवनको संकेतको खोजी रहेको एउटा मिसन र अर्को मिसन भने पृथ्वीको नजिकको ग्रह शुक्रमा अवतरण गर्ने हो । तर यी दुवैका लागि कस्तो प्रविधि र कति खर्च लाग्ने र यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा भने नासाको सामु चुनौती रहेको छ ।
साइन्सन्युजडटओआरजीबाट भावानुदित ।
नासाको टेस टेलिस्कोपले भेट्टायो आफ्नो पहिलो एक्सोप्लानेट
अमेरिका । अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (नासा)को ट्रान्जिटिङ एक्सोप्लानेट सर्वे स्याटेलाइट (टीईएसएस – टेस)ले आफ्नो पहिलो एक्सोप्लानेट (हाम्रो सौर्यप्रणालीभन्दा बाहिरको ग्रह) फेला पारेको छ । गत अप्रिलमा नासाले टेसलाई अन्तरिक्षमा
अमेरिका । अमेरिकी अन्तरिक्ष विज्ञान संस्था (नासा)ले पृथ्वीको सतहबाट हिउँ पग्लने क्रम र समुद्री सतहको उचाइमा भइरहेको वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न शनिबार अत्याधुनिक लेजर उपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ । करिब १
प्रकाण्ड रिहा हुनासाथ फेरी पक्राउ
काठमाडौँ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सर्वोच्च अदालतको आदेशले जिल्ला अदालत नुवाकोटको रोहवरमा सोमबार रिहा हुनासाथ अदालत परिसरबाट फेरी पक्राउ परेका छन्। बेलकोगडी नपा–९ मा गत साउन ७